Archive du 20200508
Tranga 35 indray andro Rakotra Coronavirus Antananarivo sy Toamasina
Olona 35 be izao no voamarina, fa mitondra ny Coronavirus teto Madagasikara, nampiakatra ny isa ho 193, araka ny tatitry ny Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle Mpitondra tenin’ny CCO Covid-19 eny Ivato.
Radavidson Andriamparany "Mila fanarenana ny fiainam-bahoaka"
Naneho hevitra manoloana ny krizy ara-pahasalamana ny mpanao politika, Radavidson Andriamparany. Zavatra roa no andrasany amin` ny fitondram-panjakana amin` izao fiatrehana ny aretina COVID-19.
Ramboasalama Emilien “Fidio ny sefom-pokontany”
Miteraka olana goavana eny anivon` ny fiarahamonina ny komity Loharano amin` izao fotoana izao.
Fivoriana tsy ara-potoana CUA Tsy mbola voaresaka ny fandrodanana tsena
Antony nampanantsoina vonjimaika ireo mpanolotsainan` ny tanàna eo anivon` ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) dia mahakasika ny adihevitra momba ny fandrondanana tsena eto an-drenivohitra izay anisan` nisongadina
Parlemantera Frankofonina Nikatro-doha tamin’ny Banky Iraisam-pirenena
Nivory tamin’ny alalan’ny fomba fifandraisan-dafitra ny Parlemantera Frankofonina,
Tosika Fameno Nisoratra anarana ny ankamaroan'ny olona ao Ampitatafika
Malaza be ny tosika Fameno amin’izao, ilay lela-vola 100.000 zarain’ny Fitondram-panjakana ho an’ireo olona tena marefo eny anivon’ny fiaraha-monina.
Fiondranana an-tsokosoko ivelan’Antananarivo Taxi-brousse 5 sy fiara madinika 3 no tratran’ny polisy
Manoloana ny fiparitahan'ilay valan'aretina covid19 dia hentitra ny avy ao amin'ny polisim-pirenena amin'ny fampiharana ny lalana ary mitohy ny ezaka
Fambolena artemisia Hampivoatra ny fihariana ifotony
Nitsidika ny orinasa Bionnex sy Quimpexx tany Fianarantsoa ny misitry ny tontolo iainana Baomiavotse Vahinala Raharinirina mba hijery ny fomba famokarana ny Artemisia sy ny Quinquina.
Eric Celerier Efa nanao faminaniana ho an'i Madagasikara ihany koa
Ankoatry ny resaka faminaniana ramatoa Brezilianina dia efa nisy karazana faminaniana ihany koa nitranga tetsy amin’ny Arena Ivandry, raha tsiahivina, ny 25 Aprily teo.
Savorovoro tany Ambovombe Tsy dahalo izany i Gaston
Manizingizina ny fianakavian'ilay lehilahy maty nandritra ny fifandonana andian'olona sy ny mpitandro filaminana tany Ambovombe fa tsy dahalo izany i Gaston.
Baolina kitra ny Allemagne Hiverina an-kianja amin’ny 15 mey ny Bundesliga
Nanapa-kevitra ny DFL « Ligue allemande » fa amin’ny faha-15 mey 2020 ho avy izao no haverina indray ny fifaninanana Bundesliga.
Fanamboaran-dalana eo an-tampon’Itaosy Miandry ny fivoahan’ilay TEF ny kaominina manodidina
Anisan’ny lalana tena mampitaraina ny rehetra, indrindra fa ireo vahiny ny lalana eo an-tampon’Itaosy miazo ny kaominina Ambavahaditokana, distrikan’Atsimondrano.
Mpisehatra amin’ny fanabeazana Nitondra soso-kevitra, nandroso vahaolana
Mitoetra ny mety ho teritery ary tsapa fa ho sarotra kokoa ny fiarafaran’ny taom-pianarana, hoy ny fanambarana nataon’ny CONAMEPT, STEM, ASSEP, FEKRIMPAMA, FIMPAFHAM omaly.
EPP Maurice Guillot Toamasina Ovaina anarana amin’ny teny Malagasy
Isan’ireo fotodrafitrasa notsidihan’ny filoham-pirenena, Andry Rajoelina, tao Toamasina omaly, ny EPP Maurice Guillot.
Asan-dahalo Notifirina teo amin’ny lohany ilay raim-pianakaviana
Dahalo am-polony no indray nanafika raim-pianankaviana iray tao Tanandava Beroroha ny talata alina hifoha alarobia teo.
IVATO Vita "beton" ny lalan-kely rehetra
Mitohy ny asa fampandrosoana ho an’ny kaominina Ivato. Vita lasi-tsimenitra na beton mateza tsara ny lalana ao amin’ny K4 midina avy an-tsena manaraka ny tambohon'ny trano fandraisam-bahiny lehine iray eny an-toerana.
Kaominina Alakamisy Fenoarivo Nampian'ny Ben'ny tanàna ireo ankizy hanala CEPE
Nozaraina kiraro avokoa ireo ankizy mpianatry ny sekolim-panjakana hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE ao anatin’ny kaominina Alakamisy Fenoarivo, distrikan’Antananarivo Atsimondrano.
Tosika Fameno ao Toamasina Nampiakarina ho 42 000 isa ireo tokantrano omena
Nosantarin’ny filohan’ny repoblika, Andry Rajoelina, omaly, ny fizarana Tosika Fameno ao an-toerana.
Entona fandrehitra Nihena amin'ny an-tsasany ny fanjifana
Miantraika any amin'ny fanjifana Gaz na entona fandrehitra ny fahamehana ara-pahasalamana narahana fihibohana.
Soavimasoandro Sosotra amin'ny sefom-pokontany ny mponina
Taorian` ny namoahan` ny sefom-pokontany ao Soavimasoandro tarehimarika mampiahiahy amin` ny aretina COVID-19 taminà fahitalavitra tsy miankina iray dia nampiaka-peo ny mponina eny anivon` io fokontany io omaly.
Malagasy sasany mafy loha Tena nahatezitra an-dRajoelina
Tena sorena kely aho, mba tsy hilazako hoe sorena be satria efa miasa andro aman’alina izahay hiarovana ny vahoaka, ahitana ny fanefitra kanefa misy manao tsirambina amintsika dia izao no mahazo.
Tarehimarika momba ny Covid 19 Fa inona ity nahazo ny OMS ?
Fa inona marina ny zava-nitranga nahatonga ny tarehimarika niaka-nidina tao amin'ny tranokalan'ny OMS na ny sampandraharahan'ny firenena mikambana momba ny fahasalamana.Somary nampisavorovoro omaly tontolo andro ny fampitam-baovao nomeny.
Toamasina Tsy misy zaza matin'ny Coronavirus izany
Tsy maty izany ilay zazalahikely vao 9 volana monja voan’ny Covid 19 eto amintsika. Salama tsara izy amin’ny ankapobeny, misakafo tsara ihany koa na dia mitondra ilay tsimok’aretina aza.